ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်ဥပဒေရေးရာပြဿနာများကိုရင်ဆိုင်ရဘယ်တော့မှစခွေငျးငှါအဘယ်မှာရှိကြင်နာနေရာတစ်ခုအဖြစ်ကမ္ဘာ၏စဉ်းစားရန်ကောင်းတဲ့ပါပဲ။ သင်စာရင်းဇယားလေ့လာလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်တို့ကိုတစ်ချိန်ချိန်သင်သည်သင်၏လက်ပေါ်မှာတစ်တရားစွဲဆိုမှုနှင့်အတူတက်လေလိမ့်မည်ဟုအကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်ကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်။ တစ်ခုထက်ပိုသော။ ရှေ့နေဂျေးလက်အိတ်အဆိုအရ, US မှာပျမ်းမျှလူတစ်ဦးသူသို့မဟုတ်သူမ၏တစ်သက်တာ၌ခုနစ်တရားစွဲမှုရင်ဆိုင်။ ကနှင့်အတူတစ်ဦးမသမာရှေ့နေလောင်စာဖြည့်စွက်နှင့်သင့်ပြဿနာများ၏မီးတောက် Fanning လာပါတယ်။
ဤသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုပိုင်ဆိုင်သူကိုပုံမှန်လူတို့အဘို့ ပို. ပင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သော, မမျှော်လင့်ဘဲတရားစွဲမှု-ဖြစ်ကောင်းသင်၏ဥစ္စာ-စခွေငျးငှါသည့်အချိန်တွင်မဆိုသင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှကယ်နှုတ်ခံရလုဖို့နှင့်လိုက်အောင်ကြိုးစားမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရာတစ်ခုမှာအများဆုံးလူတို့အဘို့အချို့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတရားစွဲဆိုမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စမှတဆင့်လာရှိမရှိဒါဟာအရေးမထားဘူး။ ဒါဟာကွာရှင်း, ဒါမှမဟုတ်ပင်အခွန်ကိစ္စကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတရားရုံးတွင်တက်လေတိုင်း, သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုချင်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကိုအနည်းဆုံးအချို့ကိုဆက်လက်ရှိနေရန်ကာကွယ်ပေးခဲ့တယ်။ ကဲ့သို့သောများစွာသောမှဖွင့် ကမ်းလွန်ဘဏ် အသက်တာ၌ထိုကဲ့သို့သောကံဆိုးဘေးကနေသူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သင့်လျော်သောဥပဒေရေးရာ tool ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်။
ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ကလူကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်သလဲ? အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်သာကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ 4.2% ရှိပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ 80 ကမ္ဘာ့ရှေ့နေများ၏% နှင့်ကမ္ဘာ့တရားစွဲမှု၏ 96% ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု ဤသူတို့ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးမှအများဆုံးစိုက်ရသောခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်သကဲ့သို့အမေရိကန်များအတွက်ဂိမ်း၏အမည်ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်ထဲကပုဂ္ဂိုလ်ရေးမြို့တော်ရွေ့လျားလူအများစုဟာပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏အယူအဆအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။ Plus အားမိမိတို့အကျိုးအမြတ်အလားအလာအနာဂတ်ခြိမ်းခြောက်မှုများ-အကြွေး, တရားနှင့်ကွာရှင်းကာကွယ်ပေးရန်လိုအပ်ခံစားရသည်။ အများစုမှာတရားဥပဒေဆိုင်ရာတိုက်ခိုက်မှုအမေရိကန်အတွင်းပိုင်းမှလာကြ၏။
သူတို့ကအစကသူတို့အခွန်ငွေပေးချေမှု minimize လုပ်ဖို့ကမ်းလွန်အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဤသည်အများအားဖြင့်တခြားနိုင်ငံတွေကနေကြွလာတော်ရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေပေါ်သည်။ အမေရိကန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်လူတွေအခွန်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော Apple နှင့် Google အဖြစ်ကုမ္ပဏီများသည်ကမ်းလွန်ရေနံရန်ပုံငွေများကာကှယျနှင့်ကြီးမားတဲ့အခွန်ငွေစုပျော်မွေ့။ အမေရိကန်နှင့်မတူဘဲအချို့နိုင်ငံများတွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပေါ်၎င်းတို့၏နိုင်ငံသားများအခွန်မပေးပါဘူး။ လူတိုင်းသို့သော်ဤအားသာချက်ယူ, ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးလိုင်စင်ရအခွန်အကြံဉာဏ်ကိုမရှာနိုင်ပါ။ တစျဖနျ, ကတစ်ဦးတစ်ဦးကသင်၏စိတ်တွင်အခွန်နည်းဗျူဟာက "ဤနည်းဖြစ်သင့်" တီထွင်မယ့်တောင်ပံလုပ်ပါ။ လိုင်စင်ရအခွန်အကြံဉာဏ်ကိုရယူလိုက်ပါ။
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်ပါဝင်လူတို့အဘို့, သူတို့ကမကြာခဏအတော်ကြာသေးငယ်လွတ်လပ်သောကျွန်း-ပြည်နယ်များ၏တဦးတည်းတွင်ဤပိုင်ဆိုင်မှုထားပါ။ ဤရွေ့ကားဒေသများကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားနိုင်ငံခြားသားများစျေးကွက်အဆင်သင့်ရှာပါ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ၏အတော်များများကတရားစီရင်ပိုင်များထံမှပိုင်ဆိုင်မှုကင်းလွတ်ခွင့်ကြောင့်ဥပဒေပြုရှိသည်။ Plus အားအချို့ဒေသများသည်ဤအကောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုကောင်းတစ်ခုသဘောတူညီမှုပေးနိုင်ပါသည်။ သဘာဝကျကျ, ပညတ္တိကျမ်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ဥပဒေများအတိုင်းလိုက်နာမှတဦးတည်း obligates ။
ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုတစ်ခါတစ်ရံအတော်လေးအနည်းငယ်ပုံစံများကြာပါသည်။ ကုန်းတွင်းရွေးချယ်မှုအများကြီးရှိပါတယ်နေစဉ်, ကမ်းလွန်မော်တော်ယာဉ်များပုံမှန်အားဖြင့် ပို. ထိရောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏ရည်မှန်းချက်အဘို့ဖြစ်ကြ၏။ အထူးသ, ကမ်းလွန်ကိုး စား. ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ပူဇော်လော့။ သငျတို့သညျဤလမ်းကြောင်းဘူးကိုယူပြီးအကြောင်းကိုမှာအားလုံးအပြစ်ရှိကြောင်းခံစားရသည်မှန်လျှင်, သတိရပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ကကျနော်တို့အကြောင်းကို-သူတို့သည်သင်ဆည်းပူးရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်ခဲ့စကားပြောနေကြသည်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပါပဲ။
၎င်း၏အမာခံ, ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမှာအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုထက်ပိုပြီးဘာမှမဟုတ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ၎င်းသည်အာမခံပေါ်လစီသည်မဝယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ပုံမှန်အားဖြင့်အများကြီးပိုပြီးအကာအကွယ်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော။ သငျသညျယနေ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေလုပ်နေလျှင်, သင်ကအမြတ်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ခက်ခဲနားလည်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏လုပ်အား၏အသီးအပွကာကွယ်ပေးသည်နှင့်သင်ပိုက်ဆံချွေတာတဲ့ခံတပ်ပေူကိုဖွယ်ရှိပညာရှိတဲ့ခဲ့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျတစ်ခုထက် ပို. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်နေလျှင်သင်တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှပေါ်ပေါက်တောင်းဆိုမှုများတခြားသူတွေထိခိုက်ချင်ကြဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သငျသညျအသီးအသီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တစ်ဦးချင်း entity စဉ်းစားချင်ပေလိမ့်မည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးချင်းအခန်းကျအပေါက်သို့တစ်ခုချင်းစီကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတတ်၏။ ဒါကလမ်း, တဦးတည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားစွဲဆိုမှုသည်သင်၏တစ်ခုလုံးကိုအင်ပါယာဖြုတ်ချလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်တို့သည်ဤမျှရေခြားမြေခြားကိုပြုသည့်အခါအပြင်, သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးမဟာဗျူဟာ၏ခွန်အားတိုးမြှင့်။ ဒါကြောင့်ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့သင့်ရွေးချယ်စရာဘာတွေလုပ်နေလဲ?
နေးဗစ်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုကမ်းလှမ်းရန်မှောကျခတျေတှငျပထမဦးဆုံးကမ်းလွန်ဟေဗန်၏တစျခုဖွစျသညျ။ ဒါဟာကြိုးစား operating မျိုးစုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အန္တရာယ်မှထွက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးတလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ နေးဗစ်အတွက်ကုမ္ပဏီများလည်းမရိုးသားတဲ့ရှေ့နေတွေကနေမဝင်စေခြင်းငှါလြှို့ဝှကျထှကျသှားတိုကျခိုကျမှုကိုကာကှယျနိုငျနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဒီတစ်ခုအဖြစ်တစ်ဦးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း, သင်ထားတဲ့ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်နိုင်ပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အမျိုးမျိုးသောတရားစီရင်မှုတစ်ဦးထံမှကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလွန်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူကပေါင်းစပ်ပြီးလွယ်ကူခြင်းကန့်သတ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
သူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေရဲ့ privacy နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုမျက်နှာသာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွမ်းကျင်သူများကမကြာခဏနေးဗစ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအကြံပြုပါသည်။ အဆိုပါနေးဗစ် LLC, ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်, မည်သည့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤတွင်အချို့သောအကြောင်းပြချက်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း နေးဗစ် LLC (ကနေးဗစ်ယုံကြည်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်အထူးသဖြင့်အခါ) အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာတခုဖြစ်ပါသည်:
တဦးတည်းတစ်နေးဗစ် LLC အတွက်တဦးတည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်အကျိုးစီးပွားဆန့်ကျင်နေတဲ့တရားသဖြင့်စီရင်မီအောငျလိုကျဖို့တရားစွဲဆိုမှုဖြည့်စွက်ရှေ့တော်၌ $ 100,000 နှောင်ကြိုးတက်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါလိမ်လည်လွှဲပြောင်း ကန့်သတ်၏ပညတ်တော်အတိုင်းမျှသာနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားရုံးအမှုမကြားပါလိမ့်မယ်နေးဗစ်အကြောင်း, နှစ်နှစ်နောက်မှ, သင်ကနေးဗစ် LLC သို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထားသည့်အခါဆိုလိုသည်။
ဒီထိပ်တွင်, ကြွေးရှင်ယင်းနေးဗစ် LLC ၏ပိုင်ရှင်ကြောင့်ကြွေးရှင်များထံမှပိုင်ဆိုင်မှုစောင့်ရှောက်ဖို့ LLC သည်ငွေကြေးထောက်ပံ့နေတဲ့ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သံသယကျော်လွန်သက်သေပြရန်လိုအပ်ပါသည်။
အဆိုပါရယူနေတဲ့ကြွေးရှင်ကိုစောင့်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှု ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်ပါကရရှိထားသူပိုင်ဆိုင်မှု Multi-အဖွဲ့ဝင် LLCs အပြင် Single-အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပို. ပင်အစွမ်းထက်သည့်နေးဗစ် LLC ထက်နေးဗစ်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုအားကောင်းအသုံးအနှုန်းများ၌ထညျ့ဖို့, နေးဗစ်ယုံကြည်မှု ကမ်ဘာပျေါမှာထိရောက်မှုအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်တရားရုံးက "ပိုက်ဆံကျော်ဖွင့်" ကပြောပါတယ်အခါကမ်းလွန်ဂေါပက "တောင်းပန်ပါတယ်, သင်ဒီမှာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ " ကျွန်တော်တို့ဟာအတွင်း၌တစ်ဦးနေးဗစ် LLC ထားတစ်နာဗိစ်ယုံကြည်မှုထူထောင်တဲ့အခါမှာကပြောပါတယ်။ ကြိမ်ကောင်းသောအခါထိုလမ်းသည် client ကို LLC သည်၏မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ သူသို့မဟုတ်သူမတစ်ဦးဥပဒေရေးရာတိုက်ခိုက်မှုနှင့်အတူ hit သောအခါထို့နောက်ဂေါပက (နေးဗစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီ) တွင်ခြေလှမ်းနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးခံတပ်ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းပေးထားပါတယ်။ နေးဗစ်ပြီးနောက်ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် privacy များအတွက်ပိုကောင်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "ဘေလီဇ်ငါသည်ငါ့ပိုက်ဆံဖုံးကွယ်ဖို့နဲ့ငါခဲ့ရတယ်လျှင်အသက်ရှင်စေခြင်းငှါသွားပါမည်ဟုသောနိုင်ငံများတွင်တဦးဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒဲနစ် Lormel, အက်ဖ်ဘီအိုင်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးပြစ်မှုပုဒ်မ၏ဟောင်းတစ်ဦးဦးခေါင်းကပြောပါသည်။ "အမှန်မှာငါရှိချဖြင့်ကာကွယ်ထားခံရဖို့သွားမယ်ဆိုတာပါပဲ, နှင့် (ယူအက်စ်) အစိုးရဖြစ်ကောင်းသဘောပဲသို့မဟုတ်ငါ၏အဘဏ်စာရင်းသို့ရနိုင်ပါလိမ့်မယ်မပေးပါ။ " ထုံးစံအတိုင်းသင်ကမ်းလွန်ဘဏ်ကိုအသုံးပြုမှသာအကြံပြုသည် များစွာသောတရားဝင်, ဥပဒေရေးရာရည်ရွယ်ချက်များထဲမှတစ်ခုအဘို့။
နေးဗစ်, သင့်ပြီးနောက် ဘေလီဇ် LDC ယင်းနှင့်အတူပေါင်းစပ် ဘေလီဇ်ယုံကြည်မှု ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းပိုအစွမ်းထက်ပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိရိယာနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
မြို့တော်ပံ့ပိုးမှုများကို (ရန်ပုံငွေများသည့် LDC တည်ထောင်ရန်လှူဒါန်းခဲ့သည်) တစ်ဦးမြီရှင်များထံမှတစ်ဦးလိမ်လည်လှည်လွှဲပြောင်းပြောဆိုချက်ကိုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
တစ်ဦးဘေလီဇ် LDC များအတွက်လိမ်လည်စီးအနင်းအပေါ်ကန့်သတ်ခြင်း၏ပညတ်တော်အတိုင်းအလွန်တိုတောင်းပါတယ်။ ဒါဟာသူ့ရဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးငွေကြေးထောက်ပံ့သို့မဟုတ်နှစ်ခုသာနှစ်ပိုင်ဆိုင်မှုထဲသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့အချိန်ကနေကနေတစ်ဦးတည်းသာတစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဘေလီဇ်ယုံကြည်မှုအလားတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိပြီး ပို. ပင်အစွမ်းထက်သည့် LDC ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့အထဲမှာတစ်ဦးဘေလီဇ် LDC အတူ Belie ယုံကြည်မှုတက်ထားကြ၏။ က "မကောင်းတဲ့အရာ" ဖြစ်ပျက်သည်အထိနေးဗစ် LLC နှင့်အတူသကဲ့သို့, Client အဘေလီဇ် LDC ၏မန်နေဂျာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါတဲ့အခါကြွေးရှင်တိုက်ခိုက်မှု, အဘေလီဇ် Trust ခြေလှမ်းများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ သင့်ဒေသခံတရားရုံးများဘေလီဇ် Trustees ကျော်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်သူတို့ကလိုက်လျောဖို့ဂေါပကအတင်းအကျပ်လို့မရပါဘူး။
တစ်ဦးဘေလီဇ်ယုံကြည်မှုအဘို့အလိမ်လည်မှုလွှဲပြောင်းအပေါ်ကန့်သတ်ခြင်း၏ပညတ်တော်နိုင်ပါတယ်သကဲ့သို့တိုတောင်းပါတယ်။ ကွာရှင်းရရှိသောသို့မဟုတ်အမွေဥစ္စာဘို့န့်အသတ်များပညတ်တော်သုညဖြစ်ပါတယ်ဆိုပါတယ်။ အကြောင်း, ယုံကြည်မှုကိုသို့အဖြစ်မကြာမီတစ်ဦးအဖြစ်လွှဲပြောင်းထိုကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်, ယုံကြည်မှုကိုသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်။
မသမာရှေ့နေတောင်းဆိုမှုများမှသင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုသီးခြားထားပေးရန်, သင်သည်သင်၏စွန့်စားမှုနှင့်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏တန်ဖိုးနှင့် type ကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကမ်းလွန်ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းပြည်တွင်း၌ကိုမရရှိနိုင်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေးထားပါတယ်။ သင်သည်မည်သည့်ခေတ်မီစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းကိုဖွင့်ရှေ့တော်၌ကဒီမှာ, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုကာကှယျရန်, နှင့်အတူစတင်ဘာလုပ်ရမှန်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဦးစွာသင်အကြီးအစိုင်အခဲပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းရှိအချို့သောလုပ်ရပေမည်။
အမှန်ကတော့, သင်လျော်သောဥပဒေရေးရာ tools များထဲသို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုနေရာချရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုမှတပါး, သင်အလိုရှိသောကာကွယ်မှုရရှိနိုင်ရန်အတွက်သင့်လျော်သောတရားစီရင်မှုရွေးချယ်ရမည်။ သငျသညျနိုင်ငံခြားစီရင်တော်မူအသိအမှတ်မပြုမတရားစီရင်မှုတွင်တည်ရှိသည်ဘဏ်များတွင်ဤဥပဒေရေးရာ tools တွေကိုသင်၏အထဲမှာပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးစုံနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတည်ထောင်ရန်မျှမျှတတရိုးရှင်းတဲ့မြန်ဆန်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပို့ချသည့်အခါအပြင်, ဒီတော့လုပ်နေသဖြင့်သင်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာကာကှယျစောငျ့ရှောကျနိုငျသညျ။ ကျွန်တော်တို့ကိုဤအသင်၏အလိုဆန္ဒများဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်သင်မည်သို့ပြလတံ့သောသိပါစေ။
အဆိုပါ ကွတ်ကျွန်းစုယုံကြည်မှု or နေးဗစ်ယုံကြည်မှု ယုံကြည်မှုကိုအထဲမှာတစ်ခုကမ်းလွန် LLC နှင့်အတူပေါင်းစပ်ကောင်းတစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းအမေရိကန်တရားရုံးများကိုသင်ပြန်ပိုက်ဆံဆောင်ကြဉ်းတောင်းဆိုသောအခါကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလွန်ဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီလိုက်လျောဖို့ငြင်းဆန်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာက The Tribune-ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကမ္ဘာ့စီးပွားကူးသန်းအားလုံး၏ပတ်ပတ်လည်ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအခွန်ဟေဗန်မှတဆင့်၎င်း၏လမ်းကမှတ်ချက်ချသည်။ ကမ်းလွန်ဘဏ်တစ်ခုအခွန်ဆိပ်ချဉ်းကပ်ကုမ္ပဏီနာမတော်၌ပုဂ္ဂလိကဘဏ်အကောင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြောင့်သင့်ထံမှပိုက်ဆံစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူ့ကိုမှထံမှပိုက်ဆံ shields ။ ဒါကအကြွေး, ရှေ့နေများ, ဟောင်းအိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားဘဏ္ဍာရေးရွှေလင်းတတို့သည်ပါဝင်နိုင်သည်။
"အမည်မသိကုမ္ပဏီရှိခြင်း၏ ... လှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုလုံးအကွာအဝေးများအတွက်တကယ်အသုံးဖြစ်ပါသည်, နှင့်အမည်မသိကုမ္ပဏီလာပြီတော်တော်လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဂျေဆန် Sharman, သြစတြေးလျ Griffith University ကကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းပညာသင်နှစ်ကဆိုသည်။ ကုမ္ပဏီ Making အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူသောနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးပြုနှင့်လုပ်အားခစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်ဖြစ်ပေါ်လာသော။ သင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရယူခြင်း bit နဲ့ပိုပြီးအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုယူနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အတွေ့အကြုံရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးထံမှအကူအညီရယူပါ။ ကူညီခြင်း client များပွင့်လင်းကမ်းလွန်အကောင့်အသစ်များ၏ - တနည်းကား, ဒီငါတို့သည်လည်းနေ့စဉ်ပြုပါအရာဖွစျသညျ။ သငျသညျအတူတူလုပျတဲ့အခါမှာကဘဏ္ဍာရေးတိုက်ခိုက်မှုကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ကြွလာသောအခါ, သငျသညျဖွယ်ရှိအလွန်ကျိုးနပ်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ကကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုသူတို့ဖွင့်လှစ်သိုက်များအတွက်ရုံစုံတွဲတစ်တွဲတထောင်ဒေါ်လာလိုအပ်သည်။ အခြားသူများက, အထူးသဖြင့်ဆွစ်ဘဏ်အကောင့်, ရန်ပုံငွေမှငွေလျောက်ပတ်သောငွေပမာဏကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဘဏ် မကြာခဏအကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန် $ 250,000 မှ $ 1 သန်းထံမှလိုအပ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအကာအကွယ်ပေးခြင်းများအတွက်ကမ်းလွန် Trusts မှ
ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအငြင်းပွားစရာများလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လာသည်။ အလွန်အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်ကိုချိန်း၏အထူးတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံတစ်ခုဘယ်သို့ယုံကြည်မှုစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ပညတ်တရား Settlor ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါဘူးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ယုံကြည်မှုဝယ်ဖို့အခါ, သငျသညျ့ယုံကြည်မှုကို purchasing မဟုတ်ပါဘူး, စိတ်ကိုထားပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ယုံကြည်မှုရေးသားခြင်းတစ်ဦးချင်းစီ၏အတှေ့အကွုံ purchasing နေကြသည်။
သငျသညျကိုကာကွယ်ရန်အလို့ငှာတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညတ်တော်များနှင့်အမှန်တကယ်အမှုဥပဒအတွေ့အကြုံကိုနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အခြေခံပြီးစနစ်တကျပြုလုပ်ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီက yourselfer ဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ အကူအညီရယူပါ။ ပြီးနောက်အားလုံး, ဒီကိုယ်ငွေဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု၏ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအမျိုးအစားကွဲပြားခြားနားသောရည်ရွယ်ချက်သို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်များရှိပါတယ်။
ကိုယ့်အနေနဲ့ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်ပတ်သတ်ပြီးသင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး option ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုမရရှိနိုင်အင်အားအကောင်းဆုံး tool ကိုတွေ့ပြီ။
လူတွေကသာမန်ကြွေးရှင်ကိုရှောင်ရှားထက်ပိုမိုများအတွက်ကမ်းလွန်ရေနံကိုး စား. သုံးပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့တစ်တွေလုပ်သားများလျော်ကြေးကိစ္စတွင်မိမိတို့ဥစ္စာ ransack ဖို့ရှာနေသူတစ်ဦးဦးအဘို့ထိုသို့ပြုကြ၏။ ငါတို့သည်လည်းစသည်တို့ကိုကားတစ်စီးချုံးချုံးကျသွားတယ်များအတွက်တရားစွဲမရိုးသားတဲ့ရှေ့နေများ, သင့်အာမခံအဖုံးထက်ပိုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိသောမီးကနေသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သူတို့ကိုအသုံးပွုနိုငျ
သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းစနစ်နှင့်ဝသကဲ့သို့, တကတရားစွဲဆိုမှုသပိတ်မတိုင်မီအလုပ်လုပ်ယုံကြည်မှုကိုထားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလမ်းကအကောင်းဆုံးသင်ကာကှယျစောငျ့ရှောကျနိုငျမညျဖွစျသညျ။ ဟုတ်ကဲ့, သင်က Post-တရားစွဲဆိုမှုခံတပ်အဖြစ်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော် Pre-စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းစံပြဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကမ်းလွန်ယုံကြည်မှု, ဒီရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုအဖြစ်ရေးဆွဲနေပါတယ်။ ဒါကအဆုံးရည်ရွယ်ချက်သည်သင်၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်။
ကမ်းလွန်ကိုး စား. ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအခွင့်အလမ်းများကိုပူဇော်စေခြင်းငှါနေစဉ်, သငျသညျအမြော်အမြင်ရှိရှိဒီ option ကိုချဉ်းကပ်သင့်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ provider ကအတွေ့အကြုံကိုရှိပြီးစနစ်တကျယုံကြည်မှုကို drafts သေချာအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Plus အား, ထိုဂေါပကအတူကာလကြာရှည်ဆက်ဆံရေးဟာသူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက၎င်း၏ဖန်တီးမှုကိုလမ်းညွှန်သင့်ပါတယ်။
စုဆောင်းနေတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကြွေးရှင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုသို့အမေရိကန်နိုင်ငံထဲကပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းခြင်းတစ်ဦးဖြစ်စေခြင်းငှါ, လိမ်လည်လှည်စီးအနင်း။ သို့သော်ဤမျှသာယေဘုယျအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပြစ်မှုဆိုင်ရာအကျိုးဆက်များရရှိထားသူတစ်ဦးအရပ်ဘက်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီထားသောစာပိုဒ်တိုများများအတွက်တစ်ဦးကပိုကောင်းတဲ့သက်တမ်းတစ်ဦး "voidable ငွေပေးငွေယူ။ " တကယ်တော့ဖြစ်ပါသည်, ဒီ Uniform ဥပဒေကော်မရှင်ယခုအသုံးပြုအတိအကျထားသောစာပိုဒ်တိုများဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စကားလုံးဖြစ်ပါသည် လိမ်လည်လှည် တကယ့်ထက်ပိုပြီးလေးနက်ကြောင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ရန်မပြည့်မဦးဆောင်လမ်းပြကြတယ်။
အခြေခံအားဖြင့်ကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ဤအမြိုးအစားမြားနှငျ့တစျခုဖမ်းလည်းမရှိ။ ဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု "အခွန်ဆိပ်" ဥပဒေများကိုအတိုင်းလိုက်နာရန်သေချာစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဥပဒေများနှင့်တူသောအရာတို့ကိုပြုကြဖို့သေချာပါအောင်ပါဝင်သည်:
အားလုံး undistributed င်ငွေဝင်ငွေအဖြစ်အခွန်ကောက်နိုင်ပါသည်။
ကြိုတင်နှစ်များတွင်ထုတ်ပေးခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါအနေနဲ့ကမ်းလွန်ယုံကြည်မှုအတွက်မဆိုစုဆောင်းဝင်ငွေရရှိမှုများအတွက်အကောင့်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တစ်ဦးဖြန့်ဖြူးအမေရိကန်အဲဒီနှစျအပေါ်ဝင်ငွေအခွန်ပေးဆောင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာယခင်နှစ်များတွင်ရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေခဲ့ကြသည်ရုံလျှင်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဝင်ငွေယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်မခံခဲ့ရလျှင်, သင်နှစ်ဦးစလုံးပြစ်ဒဏ်နှင့်အကျိုးစီးပွားပေးဆောင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ အောက်ခြေလိုင်းကမ်းလွန်င်ငွေအခွန်ကြားနေဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကမ်းလွန်သို့မဟုတ်ကုန်းတွင်းသင့်ရဲ့ရန်ပုံငွေများကိုကိုင်ထားလျှင်သင်အခွန်ပိုမိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းပေးဆောင်ကြပါဘူး။
အဆိုပါ IRS ကိုရိုးရှင်းသောအခွန်ပုံစံ file မှသင် (သို့မဟုတ်သင့်တကြ် CPA) ကိုမေးပါလိမ့်မယ်။ ပုံစံယုံကြည်မှုကို၏အတွင်းပိုင်းပိုင်ဆိုင်မှု၏တန်ဖိုးရှငျး။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ယုံကြည်မှု၏အမှန်တကယ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအမည်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျဤအစီရင်ခံစာ file ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင်သင်သည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အများ၏တစ်ဦး $ 10,000 နှောင်းပိုင်းတွင်အခကြေးငွေဒဏ်ငွေဝင်ငွေလိမ့်မည်။ သငျသညျလုံးဝအစီရင်ခံစာ file ရန်ပျက်ကွက်ပါက ပို. ပင်အားစိုက်ရသောရနိုင်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့စာရင်းကိုင်ပြည့်စုံရှိသည်နှင့်အချိန်ပေါ်ရိုးရှင်းသောပုံစံများ file ရန်သေချာစေပါ။
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်အကောင့်ရှိပါကတစ်နည်းမှာ IRS ကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ အချို့မှားယှငျးစှာယုံကြည်အဖြစ်ကမ်းလွန်အကောင့်ရှိခြင်း ", အနီရောင်အလံ" မြှင့်မထားဘူး။ သူတို့ကသာသင့်ရဲ့ဝင်ငွေသတင်းပို့ကြောင်းဂရုမစိုက်။ သငျသညျကုန်းတွင်းသို့မဟုတ်ကမ်းလွန်အမြတ်ဝင်ငွေပဲဖြစ်ဖြစ်, သငျသညျဝင်ငွေအဘယျသို့သတင်းပို့သည်။ ဒါကြောင့် IRS ကိုမှအရေးပါသည်ဟုကမ်းလွန်သို့မဟုတ်ကုန်းတွင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာအရေးပါသောသူတို့ကိုဝင်ငွေရရှိမှုဖြစ်ပေါ်ဘယ်မှာနေပါစေသင့်ရဲ့ဝင်ငွေရရှိမှုသတင်းပို့သည်။
ကမ်းလွန်ကော်ပိုရိတ်များနှင့် Trust မှအခွန်သိကောင်းစရာများ
သငျသညျ grantor, transferor, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးနိုင်ငံခြားအိမ်ခြံမြေ၏ executor အဖြစ်သတိထားမိဖြစ်သင့်အချို့သောအရေးကြီးသောအခွန်အကြံပေးချက်များရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားယုံကြည်မှုသူများသည်နိုင်ငံခြားယုံကြည်မှုသို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရွေ့လျားအဖြစ်အမေရိကန်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများအောက်ပါအချက်အလက်များကိုသိကြသင့်ပါတယ်။ သငျသညျတခုကနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီ၌ရှိသကဲ့သို့သင့်ရဲ့နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကိုင်ဆောင်နေလျှင်အလားတူပဲ, သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ်ပါကအခြားအမှုအရာရှိပါသည်။ သငျသညျအောက်ကအမျိုးအစားမဆိုထဲသို့ကျလျှင်အထူးသင့်လျော်သောအရေးယူ:
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ 10% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောအပိုင်ထဲမှာရှယ်ယာရှင်ဖြစ်ကြသည်။ ဒါ့အပြင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ထက်ဝက်ကျော်စတော့ရှယ်ယာငါးသို့မဟုတ်နည်းပါးလာအမေရိကန်ပိုင်ရှင်တွေရှိပါတယ်။
ငါးသို့မဟုတ်နည်းပါးလာအမေရိကန်တွေသင့်ရဲ့ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ၏စတော့ရှယ်ယာနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, 60% နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝင်ငွေအထက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေဖြစ်ပါတယ်။
သင်တစ်ဦး၏ရှယ်ယာရှင်ထိန်းချုပ်မှုများ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု 50% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကိုင်ဆောင်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျ 75% လုပ်နေပါတယ်နှင့်အလားတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝင်ငွေနှင့်အတူစုစုပေါင်းဝင်ငွေအထက်။
အထက်ပါမဆိုမှန်ပါသလား? ဒါကြောင့်ဆိုပါက, သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခွန်ပြန်ပေါ်ဝင်ငွေသတင်းပို့ရန်သေချာစေပါဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူတွေ့ကြုံသောသူတကြ် CPA နှင့်အတူတိုင်ပင်ဖို့သေချာပါစေ။ ဒီနယ်ပယ်ထဲမှာအသိပညာဗဟုသုတဖြင့် CPAs အများစုဟာချမ်းသာကြွယ်ဝတစ်ဦးချင်းစီ၏မြင့်မားသောအရေအတွက်ကိုရှိသည်သောပိုကြီးတဲ့မြို့မြို့တို့မှဖြစ်ကြသည်။ Bugtussle မှသင်၏ဖော်ရွေရပ်ကွက်အတွင်းတကြ် CPA, ကီဖွယ်ရှိသူ၏ဦးခေါင်းကိုကျော်ထဲမှာပါလိမ့်မယ်။ သင်ဆဲသင့်ဒေသခံကောင်လေးသို့မဟုတ်ကောင်မလေးတစ်ယောက်သင့်ရဲ့အခြေခံဖိုင်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ကမ်းလွန် FILE အဘို့, နယ်မြေကိုသိရှိသူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရယူပါ။
ရှင်းနေသည်မှာ, သင်သည်သင်၏မျက်စိကျယ်ပြန့်ဖွင့်လှစ်နဲ့ကမ်းလွန်ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုယုံကြည်မှုထူထောင်သင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအကြွေးများလက်လှမ်းမမီကျော်လွန်သင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုနေရာတစ်လမ်းပေးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်စမတ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအခွန်ဖိုင်အသိအမြင်နှင့်အတူသငျသညျအမှုအရာညာဘက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Plus အား, သင်မရိုးသားတဲ့ရှေ့နေတွေကနေသင့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရုံဥပဒေရေးရာအန္တရာယ်ကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ပေးရန်ထိရောက်သောနှင့်အစွမ်းထက်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေ။ ဒါကြောင့်တခြားပုံမှန်လူတွေနေ့တိုင်းဒါလုပ်ပါ။
ဒေါက်တာ Kristy နယ်လ်ဆင်
> ကျအခနျး7မှ